Ploitical – Thadin Media
March 17, 2018 aPloitical
[Zawgyi] ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်မှာ ဒီလ ၁၅ရက်နေ့က အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အကြားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး တပ်မတော်ဖက်က KUNဖက်က စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ KNU ဖက်ကတော့ တပ်မတော်ဖက်က စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ တပ်တွေ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိ ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။ ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အကြားမှာ ဒီလ ၅ရက်နေ့ကတည်းက တိုက်ပွဲတွေ စတင်ခဲ့တာပါ။ ဒီလ…
လမ်းဖေါက်နေတဲ့တပ်တွေ ဆုတ်ပေးဖို့ KNU တောင်းဆို
[Zawgyi] ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်က KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ တပ်မတော်ဘက်က လမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက် နှစ်ဖက်တပ်တွေအကြား စစ်ရေးတင်းမာနေပြီး တပ်မတော်ဘက်က စစ်ကြောင်းတွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ KNU က တောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ လမ်းဖောက်ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်တပ်တွေညှိနှိုင်းမှု မပြေလည်သေးချိန်မှာ အခုလို တပ်မတော်ဘက်က အလုံးအရင်းနဲ့ လာရောက်တပ်စွဲတဲ့အတွက် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ တောင်းဆိုတာလို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေး မှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူးက ပြောပါတယ်။ “လမ်းလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နှစ်ဖက်ကြားမှာ တင်းမာမှုလေးတွေဖြစ်လာတော့ အနီးနားက ရွာလေးတွေက…
ဘင်္ဂလားရဲ့ မြေပြင်​ နဲ့ ​ဝေဟင်​တပ်​​တွေ… ဒုန်းတပ်​ဖွဲ့​တွေကို… မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ ကို ယှဉ်​ပြိုင် ​ဖို့… ရှိတ်​ဟာစီနားကိုယ်​တိုင်
[Zawgyi] မင်္ဂလာပါ… ဘင်္ဂလားရဲ့ မြေပြင်​ နဲ့ ​ဝေဟင်​တပ်​​တွေ… ဒုန်းတပ်​ဖွဲ့​တွေကို… မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ကို ယှဉ်​ပြိုင်​ဖို့… ရှိတ်​ဟာစီနားကိုယ်​တိုင်​… တိုးတိုး​ရော ကျယ်​ကျယ်​ပါ အမြန်​ဖြည့်​ဆည်းပြီး… အမှီလိုက်​​နေချိန်​မှာပဲ… ကမ္ဘာ့ စစ်​လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှု … စောင့်ကြည့်​​ရေး Global Fire Power အဖွဲ့ရဲ့ … ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အညွှန်းကိန်းမှာ​ထွက်​လာပါတယ်​… အဲ့ဒီမှာ… ၂ နိုင်ငံ စစ်အင်အားပိုင်ဆိုင်မှု … လက်နက်အင်အားပိုင်ဆိုင်မှု ​တွေအရ… ကမ္ဘာမှာ မြန်​မာက … အဆင့် ၃၁ နေရာမှာ ရှိပြီး…
တပ်မတော်ကလမ်းဖောက်တယ် … (ဒေသဖွံဖြိုးရေးလမ်း) knu တပ် မဟာ ၅ ကစ ပစ်တယ်
[Zawgyi] တပ်မတော်ကလမ်းဖောက်တယ် …] (ဒေသဖွံဖြိုးရေးလမ်း) knu တပ်မဟာ ၅ ကစပစ်တယ် … တပ်မတော်က သည်းခံနေတယ် … knu တပ်မဟာ ၅ အနေဖြင့်အတူတကွလမ်းဖောက်မှု ကိုကြီးကြပ်ရန်တပ်မတော်နဲ့ knu လူကြီးတစ်ချိုက လှမ်းခေါ်တယ် … (လုံးဝအကြောင်းမပြန်) လမ်းကိုဆက်မဖောက်ဖို့သာဟန်တားနေတယ် … ဒီလမ်းက ဒေသဖွံဖြိုးရေးအတွက်သာဖြစ်တယ် .. တပ်မတော်ကို စတင်ပစ်ခတ်သည့်အတွက် တပ်မတော်က စနစ်တကျပစ်ခတ်ရှင်းလင်းတယ် … တပ်မဟာ ၅ က ၆ ယောက်သေတယ် .. ယခုအခါတပ်မဟာ ၅…
ရှမ်းနီ ဋ္ဌာ​နေပြည်​သူ့စစ်​ ​တွေနဲ့…. ပအိုဝ်း/ရဝမ်​/လီဆူ/ရှမ်းနီ/လားဟူ/အခါ…. ဋ္ဌာ​နေပြည်​ သူ့စစ်ေ တွ ကေ တာ့ …
[Zawgyi] မင်္ဂလာပါ အမျိုးတို့… မကြာ​တော့တဲ့ ကာလတခုမှာ… သက်​ဝင်​လှုပ်​ရှား … ထိုး​ဖောက်​ဝင်​​ရောက်​လာ​တော့မယ့်​… ရှမ်းနီ ဋ္ဌာ​နေပြည်​သူ့စစ်​ ​တွေနဲ့…. ပအိုဝ်း/ရဝမ်​/လီဆူ/ရှမ်းနီ/လားဟူ/အခါ…. ဋ္ဌာ​နေပြည်​သူ့စစ်​​တွေက​တော့ … အင်​အား ​​လေးသောင်း​ကျော်​သွားပါပြီ…. သာယာ ​အေးချမ်းတဲ့မနက်​ခင်းတိုင်း… စမ်းချင်​လို့ အားပြင်​​နေပြီမို့… တခု​လောက်​​တော့​ပြောသွားသင့်​တယ်​.. [Unicode] မင်ျဂလာပါ အမြိုးတို့… မကွာတော့တဲ့ ကာလတခုမှာ… သကျဝငျလှုပျရှား … ထိုးဖောကျဝငျရောကျလာတော့မယျ့… ရှမျးနီ ဋ်ဌာနပွေညျသူ့စဈ တှနေဲ့…. ပအိုဝျး/ရဝမျ/လီဆူ/ရှမျးနီ/လားဟူ/အခါ…. ဋ်ဌာနပွေညျသူ့စဈတှကေတော့ … အငျအား လေးသောငျးကြျောသှားပါပွီ…. သာယာ အေးခမျြးတဲ့မနကျခငျးတိုငျး… စမျးခငျြလို့…
ဒီ ​လောက်​ အ တန်​တန် ​ရှင်းပြ ​နေ တဲ့ ကြား က… နယ်​ ​မြေ ​ကျော်​ လွန် ​တယ် ​ဆို တဲ့ အ​ကြောင်းပြချက်​နဲ့… ​ဘော​ကျော်​ ဟဲ တို့ အု ပ် ​စု… ရှေ့တလှမ်း ဆက်​တိုး လိုက်​ပါပြီ
[Zawgyi] ဒီ​လောက်​ အတန်​တန်​ရှင်းပြ​နေတဲ့ကြားက… နယ်​​မြေ ​ကျော်​လွန်​တယ်​ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်းပြချက်​နဲ့… ​ဘော​ကျော်​ဟဲတို့ အုပ်​စု… ရှေ့တလှမ်းဆက်​တိုးလိုက်​ပါပြီ… ဒီနေ့ နေ့လည် … ၁၂နာရီ​ကျော်​​​လောက်​က… မယ်ကျိခိ နဲ့ ဝါသိုးခိုကြား မှာ… ပုံမှန်​ လမ်း​ဖောက်​​နေတဲ့… စစ်​​ကြောင်းနဲ့ ဒိုဇာအဖွဲ့​တွေကို… KNLA,အဖွဲ့က… ကြားဖြတ်​ ​ချောင်းပစ်​ရင်း… နှစ်​ဖက်​တိုက်​ပွဲငယ်​ အဖြစ်​… တစ်​နာရီကြာ​လောက်​ ထိ​တွေ့မှုရှိခဲ့တာပါ… ခုဆိုရင်​… တပ်​မဟာ(၅)ပြသနာကို… NCA,ညီလာခံမှာ အ​ရေးတကြီးထည့်​သွင်း… ​ဆွေး​နွေးဖို့… တာဝန်​ရှိသူ​တွေအ​နေနဲ့… အ​ရေးတကြီး​ဆောင်​ရွက်​​နေချိန်​လည်း… ဖြစ်​ပါတယ်​… ​ပြောချင်​တာက… မင်းတို့ ​ဒေသခံမျက်​နှာ​တွေကိုကြည့်​​နော်​… အဲ့ဒါ…
နမ္မတူ​ဒေသအတွင်း ကျုး​ကျော်​ဝင်​​ရောက်​လာ​သော TNLA တပ်​ဖွဲ့များကို ရှမ်းပြည်​တပ်​မ​တော် တိုက်​ထုတ်​နိုင်​ခဲ့ဟုဆို
[Zawgyi] နားဆိုင်း​ကျေးရွာ ရွာထိပ်​ ကားလမ်းန​ဘေးတွင်​ ၁၂ . ၃. ၂၀၁၈ ​နေ့ရက်​ကစတင်​ပြီး ကျူး​ကျော်​ဝင်​​ရောက်​လာ​သော TNLAတပ်​ဖွဲ့များကို (၁၃) ရက်​​နေ့တွင်​ ရှမ်းပြည်​တပ်​မ​တော်​မှ တိုက်​ထုတ်​ရှင်းလင်းနိုင်​ခဲ့တယ်လို့ RCSS ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ တိုက်​ပွဲအတွင်း TNLAတပ်​ဖွဲ့ဝင်​ အများအပြား ကျရှုံးလျက်​ရှိပြီး ဒဏ်​ရာရသူများကိုလည်း မနိုင်​တနိုင်​ဆွဲထုတ်​​ခေါ်​ဆောင်​သွားခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုအချိန်​တွင်​ နားဆိုင်း​ကျေးရွာဖက်​ တိုက်​ပွဲများ ငြိမ်​သက်​​သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်​သည်​။ TNLAအဖွဲ့၏ ရုပ်​​အ​လောင်း (၂)ဦး၊ လက်​နက်​ငယ်​ ၄ လက်​၊ ကျည်​​​ဘောက်​(၁၆) ကဒ်​၊ RPG…
အမုန်းတရားဆီသို့ ဦးတည်နေသည့် ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ အား KIA မှ လူသစ် စုဆောင်းမှုပြဿနာ
March 16, 2018 aPloitical
[Zawgyi] ရှမ်းမျိုးနွယ်စုရေးရာအဖွဲ့မှ KIA ဖမ်းဆီးထားသော ရှမ်းလူငယ် ၂၈၀ ရှိပြီး လွတ်မြောက်လာသူ ၉၀ ခန့်သာ ရှိသေး ကြောင်း ပြောဆိုမှုအပေါ် KIO နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့မှ ၎င်းအဖွဲ့၏ ပြောဆိုသော ပမာဏသည် များလွန်းပြီး KIA စုဆောင်းထားသော လူသစ်မှာ ထိုမျှလောက်ထိ မရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားသည်။ ထိုအဖြေက ရှင်းပါသည်။ KIO နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့၏ ပြောစကားအရ KIA အဖွဲ့အနေဖြင့် ဒေသခံ ရှမ်းမျိုး နွယ်စုများအား လူသစ် အဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားကြောင်း ၀န်ခံလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။…
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ (၅)နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
[Zawgyi] KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ၊ တပ်မဟာ (၅)နယ်မြေ၊ မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင်၊ ဒွဲ့လိုးမြို့နယ်၊ (ကမမောင်းမြို့နယ်)၊ လေးဖိုးထကျေးရွာအုပ်စု၌် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့နေ့လည် ၁၂နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် အစိုးရတပ်မတော် တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံ၊ ခြေမြန်တပ်ရင်း(ခမရ-၂၀၃)နှင့် ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA တပ်မဟာ(၅)၊ (၁၀၂) တပ်ရင်းတို့အကြား (၁၅)မိနစ်ခန့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိသည်ဟု KNU ဘက်က ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အစိုးရတပ်မတော်တပ်ရင်း(ခမရ-၂၀၃)ဘက်မှ အထက်အမိန့်အရ ဒေသခံရွာသားများကို သွားရောက်ကူညီရ မည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် KNLA တပ်ခွဲတာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခွင့်တောင်းခဲ့ရာတွင် KNLAဘက်မှ သတ်မှတ်နယ်မြေဖြစ်သောကြောင့်…
ငြိမ်းချမ်းရေး ပြေး လမ်း ပေါ်က နောက်ထပ် “မြင်း”
[Zawgyi] အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA မှာ မွန်ပြည်သစ်နဲ့ လားဟူတို့ပါ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ယခင် အစိုးရလက်ထက် ရေးထိုးခဲ့ပြီးသား (၈) ဖွဲ့အပါအဝင် လက်ရှိ (၁၀) ဖွဲ့ထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီလမ်းက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟို ဌာန NRPC မှာ KNPP ကရင်နီ အမျိုးသားတိုးတက်ရေး ပါတီ ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစု…